पूर्व प्रेमिकालाई बसभित्र ३० भन्दा बढी पटक च’क्कू घो’पे, भीड बन्यो र’मिते – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. पूर्व प्रेमिकालाई बसभित्र ३० भन्दा बढी पटक च’क्कू घो’पे, भीड बन्यो र’मिते – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
पूर्व प्रेमिकालाई बसभित्र ३० भन्दा बढी पटक च’क्कू घो’पे, भीड बन्यो र’मिते
मेक्सिकोको एक भीडभाडयुक्त बसमा एक व्यक्तिले आफ्नी पूर्व प्रेमिकालाई तीसभन्दा बढी पटकसम्म च’क्कूले ह’मला गरे । यी महिला ह’मलाका बेला चि’च्याइरहेकी थिइन् तर त्यहाँको भीड उनलाई उ’द्दार गर्नुको साटो रमिते बन्यो । तरपनि यी महिलाको ज्या’न भने ब’चेको छ ।
सिनालोआ शहरमा भएको यो दु’र्घटनापछि मानिसहरु स्त’ब्ध छन् । ३३ वर्षकी यी महिलालाई भेट्न उनका पूर्व प्रेमी आए र अचानक उनीमाथि ह’मला गर्न थाले । हमलाका कारण महिला रु’न थालिन् र मद्दतका लागि गु’हार गरिन् ।
महिलाका पूर्व प्रेमीले ३० भन्दा बढी पटक ह’मला गर्दा पनि उनी बाँ’च्न सफल भएकी छिन् किनभने चिसो भएका कारण यी महिलाले एउटा निकै मोटो ज्याकेट लगाएकी थिइन् । यो ज्याकेटका कारण महिलाको कुनै पनि महत्वपूर्ण’ अंगमा क्ष’ती पुगेन जसका कारण यी महिलाको ज्या’न बच्यो ।
यो बसमा भएका यात्रुले यी महिलाको मद्दत त्यतिबेला मात्रै गर्न सुरु गरे जब उनका पूर्व प्रेमी ह’मला गरेपछि त्यहाँबाट भा’ग्न कोसिस गरे तर यी व्यक्तिलाई प्र’हरीले प’क्राउ गर्यो । स्थानीय मिडियाका अनुसार यी व्यक्तिलाई प’क्राउ गर्दा उनले आफूले आफैंलाई मा’र्ने कोसिस गरेका थिए ।
यद्यपि, यो ह’मलामा महिलाको हात र खुट्टा नराम्रोसँग का’टिएको थियो । स्थानीय मिडियाका अनुसार यो घटना भ्यालेन्टाइन्स डेको केही दिन पछि नै घटेको थियो । घटनाको सिसिटिभी फुटेज हालै मात्र जारी भएपछि यसबारे थाहा भएको छ । मेक्सिको एटर्नी जनरल एलेजाद्रो मनेरोका अनुसार मेक्सिकोमा पछिल्लो थुप्रै वर्षमा महिलाविरु’द्ध हिं’सामा निकै वृ’द्धि भएको छ र पछिल्लो पाँच वर्षमा महिलाविरु’द्ध हिं’साको घ’टनामा १३७ प्रतिशतको वृ’द्धि भएको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको February 23, 2021 February 23, 2021 102 Viewed